Double Point Days on 10.10 Super Sale ~ The ICT.com.mm Blog
Double Point Days on 10.10 Super Sale
10.10 Super Sale မှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူဖို့ အောက်ပါ link လေးကိုနှိပ်ပြီး ရွေးချယ်လိုက်တော့နော်။ ၁၂ ရက် နေ့ အထိပဲနော်။
Working Professional တွေအတွက် အသုံးတည့်မဲ့ ကုမ္ပဏီသုံး၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းလေးတွေကို 10.10 Super Sale မှာ အထူးစပါယ်ရှယ်ဈေးနဲ့ AOC, BENQ, HP, NEC, TARGUS စတဲ့ ကွာလတီ Brands တွေချည်းပဲမို့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ link လေးကို နှိပ်ပြီး ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်။
Office or Work From Home Solutions
1. ​DIGITAL SIGNAGE(7) » https://bit.ly/3ByVpLG
2. ​INTERACTIVE WHITEBOARDS(6) » https://bit.ly/3uWSKZW
3. ​LASER PRINTERS(4) » https://bit.ly/3v2gAUg
4. ​PRESENTATION REMOTES(1) နှင့် 5. ​PROJECTORS(3) » https://bit.ly/3oOJJkw
Learn more » https://bit.ly/3DwDFkZ
➤ အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်ရင် ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း နှင့် ငွေသားနဲ့ပေးချေမယ်ဆိုရင် ၅% Cashback ပြန်အမ်းပေးဦးမှာမို့လို့ အခုပဲ အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်လိုက်တော့နော်။
#ShopICT #Myanmar #KBZPay, #WavePay, #CBPay, Direct bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB, #workingequipment #orderonlinenow #ICT #1010supersale
Newer Double Point Days on 10.10 Super Sale
Older 10.10 Super Sale